Jiri uru ego Apple, rite uru ruo Machị 31, 2017 | Esi m mac
Apple ogologo oge gara aga nzọ na USB-C njikọta nke a mekwara nnukwu arụmụka. N’otu aka, a gwara ika ahụ ka o mepụta ihe ma mekwaa ka akụrụngwa na-adịwanye mfe ma nwee obere akụkụ. Ma n'otu oge ahụ, na ihe ndị dị na mpụga anyị bụ 100% dakọtara na ntinye nke Mac.
Apple ghọtara na mgbanwe ahụ dị oke ọnụ, n'ihi na anyị aghaghị iji ndị na-agbanwe agbanwe. Ọ bụ ya mere, jiri nwayọ, na-enweghị nkwukọrịta gbasara ya, emewo ka ogologo oge Mbelata eriri na nkwụnye USB-C, nyocha na draịvụ ike ruo mgbe Machị 31, 2017.
Nkezi ego ha dị n'etiti 20% na 40% ma etinyere ha na ngwaahịa dị iche iche, ma ndị sitere na Apple na ndị nrụpụta nke atọ. Cheta na Apple rụrụ ozi a na ozi ndị a:
Ka anyị cheta na ọtụtụ ndị ọrụ, ọkachasị ndị ọkachamara, nwere ọtụtụ kọmpụta nwere njikọta ugbu a ma na-eche mgbanwe ihu ... anyị chọrọ inyere ha aka ịkwaga na teknụzụ kachasị ọhụrụ, yana mee ka uto nke usoro okike ọhụrụ a dị ngwa.
N'echiche a, anyị ga-emerịrị ncheta: Njikọ USB-C bụ ọkọlọtọ nke ọtụtụ ụdị, ọ na-enye ohere ịnyefe ozi ruo 10Gb kwa nke abụọ, ebe ị na-akwụ ụgwọ ngwaọrụ yana njikọ ya nwere akara.
N'echiche ọzọ, Apple na-anabata iwu site taa maka LG Ultrafine 5K nyochaa nwere oke ego, ugbu a na ọnụahịa nke 1049,00 27. Ihe ngosi 27-inch a ga-adị maka nnyefe na Disemba 28 ma ọ bụ 29. Mana ọ bụrụ na ị kpebie ịmata onye nlekota na onye mbụ, tupu ịme mkpebi ikpeazụ, ị nwere ike ime ya na ụlọ ahịa site na XNUMX nke ọnwa a.
N'ikpeazụ, draịvụ ike ndị Apple belata ruo na ngwụsị ọnwa Machị na-esote afọ, kwekọrọ na draịva ndị na-etinye MacBook Pro. Ọ bụ ihe ọzọ nke akụkụ ọhụụ nke akụrụngwa ọhụrụ ahụ, n'ihi nnukwu ikike nnyefe data, ọ bụ ezie na ihu ya dị. ọkpụrụkpụ abawanye na price nke Macs.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Jiri uru ego Apple, rite uru ruo Machị 31, 2017
LG Ultrafine 5K dị ugbu a maka ịzụta na Storelọ Ahịa Apple n'ịntanetị